1 Paulo ne Timoteo, Kristo Yesu nkoa,+ de kɔma akronkronfo a wɔwɔ Kristo Yesu mu a wɔwɔ Filipi+ nyinaa, ne ahwɛfo ne asafo mu asomfo:+ 2 Yɛn Agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo adom ne asomdwoe nka mo.+ 3 Bere biara a mɛkae mo no, meda me Nyankopɔn ase daa+ 4 wɔ me nkotɔsrɛ biara a mede anigye srɛ ma mo nyinaa mu,+ 5 esiane mmoa+ a mode mae wɔ asɛmpa no ho fi da a edi kan de besi nnɛ no nti. 6 Na eyi ara mu na mewɔ ahotoso, sɛ nea ofii adwuma pa ase wɔ mo mu no, obewie+ akosi Yesu Kristo da no.+ 7 Moda me koma so,+ enti ɛteɛ koraa wɔ me fam sɛ menya saa adwene yi wɔ mo nyinaa ho, efisɛ mo nyinaa ne me nya adom no mu kyɛfa,+ wɔ m’afiase+ mpokyerɛ ne asɛmpa no ho anoyi+ ne mmara kwan so+ a mede si hɔ no mu. 8 Na Onyankopɔn ne me dansefo sɛ ayamhyehye+ a ɛte sɛ Kristo Yesu de no ara mu na m’ani agyina mo nyinaa. 9 Na nea mekɔ so bɔ ho mpae ne sɛ mo dɔ nkɔ so mmoro so+ wɔ nokware nimdeɛ+ ne nhumu nyinaa mu,+ 10 na moapɛɛpɛɛ mu ahu nneɛma a ehia koraa no,+ sɛnea ɛbɛyɛ a dɛm+ biara remma mo ho na moanto afoforo hintidua+ kosi Kristo da no, 11 na trenee aba+ a ɛnam Yesu Kristo so ahyɛ mo mã no de anuonyam ne ayeyi+ abrɛ Onyankopɔn. 12 Afei anuanom, mepɛ sɛ muhu sɛ me tebea no ama asɛmpa+ no akɔ so mmom, 13 ma enti me mpokyerɛ+ abɛda adi+ Kristo fam wɔ Aban Awɛmfo nyinaa ne wɔn a aka nyinaa mu;+ 14 na anuanom a wɔwɔ Awurade mu dodow no ara a m’afiase mpokyerɛ no ama wɔanya ahotoso no de nnamyɛ kɛse reka Onyankopɔn asɛm a wonsuro.+ 15 Ɛyɛ nokware sɛ anibere ne nitan+ na ebinom de reka Kristo ho asɛm, nanso afoforo nso de adwempa na ɛreka.+ 16 Wɔn a wɔde anisɔ yɛ saa no fi ɔdɔ mu na ɛbɔ Kristo dawuru, efisɛ wonim sɛ mewɔ ha sɛ megyina asɛmpa no akyi;+ 17 nanso wɔn a wɔde anibere ne nitan reyɛ saa no yɛ mansotwefo,+ wonkura adwempa, na wɔn adwene ne sɛ wɔbɛma ahohia+ aba me so wɔ m’afiase mpokyerɛ mu. 18 Afei dɛn? Ɛnyɛ hwee, ɛno ara ne sɛ akwan nyinaa so, sɛ́ ɛyɛ adwemmɔne+ anaa adwempa mu no, wɔrebɔ Kristo dawuru,+ na eyi ho na midi ahurusi. Nokwarem no, mɛkɔ so adi ahurusi nso, 19 efisɛ minim sɛ mo nkotɔsrɛ+ ne Yesu Kristo honhom+ a menya so no, eyi bɛma manya nkwa, 20 sɛnea mehwɛ kwan+ denneennen na m’ani da so+ sɛ m’ani renwu+ ɔkwan biara so, na mmom sɛnea ɛte daa no, nkwa mu oo, owu mu oo,+ mede akokoduru+ bɛkamfo Kristo seesei nso denam me nipadua so.+ 21 Na me de, sɛ mete ase a, ɛyɛ Kristo,+ na sɛ miwu nso a,+ ɛyɛ mfaso. 22 Na sɛ mekɔ so tena ase ɔhonam mu a, eyi yɛ m’adwuma mu aba+—nanso nea mɛpaw de, menka ho asɛm. 23 Na nneɛma abien yi hyɛ me so;+ nanso nea mepɛ ne sɛ menya me ho atetew na maka Kristo ho,+ na eyi mmom na eye koraa.+ 24 Nanso mo nti na ɔhonam mu a mɛkɔ so atena no ho hia.+ 25 Enti mewɔ eyi mu ahotoso, na minim sɛ mɛtwɛn+ ne mo nyinaa atena hɔ ama moanya nkɔso+ ne mo gyidi mu anigye, 26 na ama mo ahurusidi aboro so Kristo Yesu mu wɔ me ho bere a maba mo nkyɛn bio no. 27 Ɛno ara ne sɛ momma mo abrabɔ mfata+ Kristo asɛmpa no, sɛnea ɛbɛyɛ na sɛ meba behu mo anaasɛ minni hɔ mpo a, mɛte mo ho asɛm sɛ mugyina pintinn wɔ honhom koro mu, na mode ɔkra+ koro bom di apere ma asɛmpa no gyidi, 28 a moremma mo atamfo+ nhunahuna mo ɔkwan biara so. Eyi ara na ɛyɛ ɔsɛe ho adanse ma wɔn, nanso ɛyɛ nkwagye ma mo;+ na saa sɛnkyerɛnne yi fi Onyankopɔn, 29 efisɛ mo na Kristo nti wɔde hokwan no maa mo, na ɛnyɛ sɛ munnya ne mu gyidi+ nko na mmom sɛ munnyina n’ananmu nhu amane+ nso. 30 Na mowɔ apereperedi koro no ara a muhui sɛ mewom+ na meda so wom no mu bi.+